बाँस्कोटा कार्यकालमा ४७ अर्ब घो’टालाको आशंका ! - Sidha News
काठमाडौं। सञ्चारमन्त्री हुँदा गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले से’क्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र भूउपग्रहको काममात्र अगाडि ब’ढाएनन् नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा वि’स्तारमा समेत आफ्नो स्वा’र्थ देखाए । यी कार्यका लागि उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफू अनुकूलका अधिकारीलाई नि’युक्त गरे । अरबको मरभूमी सयर गर्दै नि’युक्तिमा पनि डि’ल भएको थियो ।से’क्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको लागत २६ अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ४२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । यसमा मात्र १६ अर्बको चलखेल देखियो । टे’प काण्डमा समेत पौने एक अर्बको कमिशनको विषय स्पष्ट सुनिएको छ जुन स्वीस कम्पनिका एजेन्ट भनिएका विजय मिश्रसँगको कुराकानी हो ।
तर, स्वीस कम्पनिले नभई फ्रान्स र जर्मनीको कम्पनिले पाए ।भू-उपग्रहको काम अमेरिकी कम्पनिहरुले १२ अर्बमा गर्ने प्र’स्ताव गरेका थिए । तर, बाँस्कोटाको द’बाबमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ३० अर्बमा ठे’क्का दिने प्र’क्रिया बढाए । यसबाट १८ अर्बको च’लखेल भयो ।नेपाल टेलिकमले फेरजी सेवा वि’स्तारका लागि १९ अर्बमा ठे’क्का दियो । मन्त्री बाँस्कोटा यसमा पनि पू’र्णत हा’वी भए । एनसेलले यही काम ६ अर्बमा वि’स्तार गरेको थियो । १३ अर्ब ब’ढाएर काम बढाइयो ।कुल मिलाएर ४७ अर्बको घो’टाला प्र’क्रिया मि’लाएर नै गरियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरिएको कमिशनको खे’लकै लागि मन्त्री बाँस्कोटाले नि’युक्ति देखि सरुवा समेत सबै मि’लाएर गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छा’नविन गर्न नमिल्ने गरी सु’रक्षित बनाइयो । जबकि टेलिकमको फोरजी सेवा वि’स्तारमा सञ्चालक समितिले नि’र्णय गर्न सक्थ्यो ।यसैगरी, सरकारलाई रकम तिर्न बाँकी कम्पनिहरु स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट र वे’वसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सि’स्टमलाई क’मिशन लिएरै पाँच किस्तामा ब’क्यौता रकम तिर्ने सुविधा बनाइदिएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यी कम्पनिहरुको इ’जाजत खा’रेज गर्ने निर्णय गरेपनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्णय उ’ल्टाएर ब’क्र्यौता रकम तिर्ने सुविधा बनाइदिएका थिए ।
कम्पनिहरुले लामो प्र’यासबीच पु’र्नजीवन पाएका थिए । यसका लागि बास्कोटाले राम्रो क’मिशन प्राप्त गरेको बु’झिएको छ ।मुलुकमा पहिलोपटक गरिएको फ्’रिक्वेन्सी लि’लाम प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच मात्र भाग लिन पाउने गरी स’र्त बनाएको थियो । यसमा पनि बाँस्कोटाले नै च’लखेल गरेका थिए । फ्रि’क्वेन्सी लि’लाममा पनि उनले मोटो क’मिशन लिएको बु’झिएको छ ।से’क्युरिटी प्रेसको १६ अर्ब, स्याटेलाइटको १८ अर्ब र फोरजीको १३ अर्ब रुपैयाँ ग’डबड भएको विषय चा’सोमा छ । यी सबै काम बाँस्कोटा मन्त्री हुँदा अगाडि बढेका थिए ।
कुल ४७ अर्बको अनियमितताको विषयमा स’त्तापक्ष र प्र’तिपक्ष दुवै मौ’न बसे । अहिले बाँस्कोटाको टे’पकाण्डपछि यो विषयले च’र्को रु’प लिएको छ ।नेपाल टेलिकमको फोरजीको ठे’क्का १९ अर्ब रुपैयाँमा चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई दिएको थियो । कामिनी राजभण्डारी टेलिकमको ए’मडी हुँदा १८ अर्बमा ठे’क्का दिन खोज्दा भ्रष्टाचार गर्न लागेको भनेर ह’टाएका मन्त्री बास्कोटाले आफैले हुवावेलाई १९ अर्बमै ठे’क्का दि’लाएका थिए। उनैले कामिनीलाई एनसेलले ६ अर्बमा गर्ने, टेलिकमले त्यतिनै क्ष’मताको लागि किन १८ अर्बमा दिने ? भनेर टे’ण्डर स’दर गर्न न’दिइ प’दमुक्त गरेका थिए ।
यसरी फोरजी सेवाको ठे’क्कामा च’लखेल गरिसकेपछि से’क्युरिटी प्रि’न्टिङ प्रेस र स्या’टेलाइटको ठे’क्का पनि टुं’ग्याएका हुन् । सञ्चार मन्त्रालयका ठे’क्का स’क्याएपछि उनले अन्य मन्त्रालयमा जाने त’यारी गरेका थिए । तर, टे’पकाण्डका कारण उनी प’दमुक्त भए ।